‘जे छु खेलकुदकै कारण छु’– कराते प्रशिक्षक, शिव - Pokhara Sports
एनओसीले तेस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम आयोजना गर्ने
नेपाललाई तीन स्वर्ण सहित १० पदक
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा ‘स्पोर्टस एण्ड इनभाइरोनमेन्ट’ सदस्यहरुको स्वागत
Home/खेलाडी व्यक्तित्व/‘जे छु खेलकुदकै कारण छु’– कराते प्रशिक्षक, शिव
‘जे छु खेलकुदकै कारण छु’– कराते प्रशिक्षक, शिव
पोखरा स्पोर्टस १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार
ठ्याक्कै ३५ वर्ष भयो क्युकिसन करातेका प्रशिक्षक शिव गुरुङ पोखरा रंगशालामा स्वयसेवी प्रशिक्षकको रुपमा रहेको । सानो कद, पातलो अनि फुर्तिलो शरिर । गालामा हल्का बुढ्यौलीका रेखा कोरिन थालेका शिवको यतिका वर्ष रंगशालामा विति सक्दा पनि हरेक विहान उनको लागि नौलो हुन्छन ।
“जिन्दगीमा न केही पाउनु छ न त केही गुमाउन । जे जति पाए खेलकुदकै कारणले पाएको छु” ढुक्क संग भन्छन शिव । १६ वर्षको उमेर बाट करातेमा छिरेका उनका खेलकुदका जिवनका पाइलाहरु ज्ति अघि बढ्दैछन त्यतीनै उनमा अव केही नियास्रो पन त छ तर उनमा खेलकुदले भरिदिएका ति विगतका दिनले उनमा अझै हौसला भरिएको छ ।
घर पोखरा १५ छिनेडाँडा लामागाउँ । मावली नुवाकोट । मावली आउँदा जाँदा उनी १६ वर्षको युवावस्थामा काठमाण्डौको खाल्टो छिरे । जिवनमा नयाँ केही गर्ने आँट बोकेर । काठमाण्डौमा काम गर्दानै उनी खेलकुद त्यही पनि मार्शल आर्टको क्युकिसन करातेमा प्रवेश गरे २०३९ सालमा । भर्खरै सुरु भएको थियो क्युकिसन काठमाण्डौमा । उनले गुरु फेला पारे राजेन्द्र खड्गी र गोपाल भुटानी जस्ता प्रशिक्षक ।
जिवनको गोरेटोका रेखाहरु कोर्दै क्युकिसनको एक उत्कृष्ट खेलाडी बनेर उघ्रिए शिव । उनका गुरु खड्गी र भुटानी कलाकारीतामा प्रवेश गरेपछि भने उनी ठ्याक्कै दुई वर्ष पछि दशरथ रंगशाला प्रवेश गरे २०४१ सालमा । त्यहाँ बाट नयाँ जिवनको सुरुवात खेलकुदमा उनको । अध्ययन भन्दा पनि पेट पाल्ने र खेलकुदमा दत्त चित्त भएर सिक्ने उनको प्रवल इच्छा दशरथ रंगशालाले पुरा गर्यो । उनले नयाँ गुरु फेला पारे जगत गौचन ।
खेलकुदमा लगनशिलता संगै मेहनत नभए सम्म सफलता प्राप्त नहुने उनको भनाई छ । खेलकुदलेनै आफूलाई सबैथोक दिएको बताउने उनी खेलकुदबाटनै आफूले सँधै सम्मान पाएको बताउँछन । “यदि खेल नभएको भए म आज के हुन्थे ? कल्पना पनि गर्न सक्दिन, त्यसैले खेल मेरो जिवनको अभिन्न अङ्ग हो” उनी भन्छन ।
जगत गौचनको छत्रछाँयामा प्रशिक्षण लिइरहेका शिवले ५ वर्ष पछि २०४६ सालमा ५५ केजी तौलमा काठमाण्डौ डोजो च्याम्पियन बने । उनको पहिलो स्वर्णपदक खेल जिवनको । उनलाई त्यो खेल अझै पनि हिजोनै खेलेको जस्तो लाग्छ । तर उनले चाखेको त्यो स्वर्णपदक स्वाद भने अहिले आफ्ना चेलालाई वाँडिरहेका छन । उनले उत्पादन गरेका धेरै चेलाहरु नेपाल च्याम्पियन बनिसकेका छन ।
आफ्नो खेल जिवनको लामो इतिहास केलाउँदा उनमा कुनै भावुकता छैन । तर यति बेला खेलकुदमा राजनितीको खेल देख्दा भने उनलाई किन खेलकुदमा छिरेछु भन्ने पछुतो भने छ । ५० नाघेका उनले तत्कालिन नौ महिने एमाले शासनकालमा बाहेक अरु बेला खेलकुदमा जागिर के हो भन्ने थाह नै पाएनन । संधै स्वयसेवीको रुपमा अझै पनि वुढ्यौली हड्डी खियाएकै छन । आफ पनि नियमित रुपमा अभ्यास गर्दै २०४० मा पोखरामा क्युकिसन कराते सिकाउन थालेका उनी २०५२ साल बाट नियमित रुपमा पोखरा रंगशालामा प्रशिक्षण दिन थालेका हुन ।
आफ्नो खेल जिवनमा २०४६ मा तेश्रो खुल्ला आमन्त्रणमा च्याम्पियन, २०५२ मा लुम्विनी च्याम्पियन, २०५१ म विरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल आमन्त्रण खुल्ला तौलमा चौथो, २०६८ मा नेपाल च्याम्पियनशिपमा खुल्ला तर्फ पाँचौ, सन २००८ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा ६५ केजीमा स्वर्ण र काता तर्फ रजत पदक जितेका छन ।
सन २००२ मा प्रशिक्षकको भुमिकामा रहेका शिव भने आफ्नो जिवनको नयाँ बाटो जापानलाई रोजे । करिव ६ वर्ष जापानमा विताएका ति दिन केबल जिवनको पाँङ्ग्रा अगाडी बढाउनका लागि मात्रै रहेको उनको भनाई छ । “खेलकुद भन्दा भन्दै पढाईको त होस नै गरिएनछ” उनलृ भने–“विदेश भासिनु बाहेक अरु केनै थियो र ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे । जापानको वसाई पछि उनी फेरि रंगशाला प्रवेश गरे । चार जना बाट सुरु भएको उनको प्रशिक्षणको अभियान अहिले पनि जारी छ । अहिले नियमित ८० जनाले उनी संग प्रशिक्षण लिइरहेका छन ।
उनले पोखरेली माटो बाट हाल सम्म नेपाल च्याम्पियनहरु विजय कुमार आले मगर, विश्वास पोख्रेल र रुपक नेपाली जस्ता होनहार खेलाडी जन्माइसकेका छन ।
आफ्नो प्रशिक्षण जारी रहँदानै उनले पोखरामा स्ट्रोङगेष्ट क्युकिसन करातेको स्थापना गर्दै त्यही संस्था बाट पैशिक्षण दिइरहेका छन । उनले गरिव तथा विपन्न खेलाडीलाई निशुल्क रुपमा प्रशिक्षण दिन्छन । आवश्यक युनिफर्मको व्यवस्था आफैले मिलाउँछन । हरेक खेलाडीलाई विदाको दिन घुमाउन लैजाने पनि गरेका छन । उनले पोखरेली माटो बाट हाल सम्म नेपाल च्याम्पियनहरु विजय कुमार आले मगर, विश्वास पोख्रेल र रुपक नेपाली जस्ता होनहार खेलाडी जन्माइसकेका छन । ति सबै खेलाडीले फुल कन्ट्याक्टमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेका छन ।
काठमाण्डौमा काम गर्दानै उनी खेलकुद त्यही पनि मार्शल आर्टको क्युकिसन करातेमा प्रवेश गरे २०३९ सालमा । भर्खरै सुरु भएको थियो क्युकिसन काठमाण्डौमा ।
दुई छोरीका धनी शिवले ठुली छोरी सोनी लामा दोङ करातेमा फष्ट डान व्ल्याक बेल्ट हुन भने बक्सिङकी समेत उत्कृष्ट खेलाडी । ३७ वर्षे खेल जिवनको लेखाजोखा उनले रामै्र संग संगालेर राखेका छन । खेलकुदमा लगनशिलता संगै मेहनत नभए सम्म सफलता प्राप्त नहुने उनको भनाई छ । खेलकुदलेनै आफूलाई सबैथोक दिएको बताउने उनी खेलकुदबाटनै आफूले सँधै सम्मान पाएको बताउँछन । “यदि खेल नभएको भए म आज के हुन्थे ? कल्पना पनि गर्न सक्दिन, त्यसैले खेल मेरो जिवनको अभिन्न अङ्ग हो” उनी भन्छन ।
Hari Krishna Neupane says:
25th April 2020 at 14:23
HATS OFF to शिब गुरू for your great Contribution to Nepalese Karate Sports.I learnt most useful lesson for life : hard work & discipline when I was his student. 🙏
दक्षिण कोरियामा उमर, उज्वल, रेखमाया र धनमायालाई स्वर्ण
“सहाराले गर्व गर्ने लायक काम गरेको छ”–यूवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा
बगर भइखलक एट ए साइड साइड जारी, पहिलो चरणका खेल सम्पन्न
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार संग करिव ३ करोड माग